आइओएमको निर्णयविरुद्ध उत्रिए डा. गोविन्द केसी, एमबिबिएस भर्ना रद्द गरी ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न माग – Health Post Nepal
आइओएमको निर्णयविरुद्ध उत्रिए डा. गोविन्द केसी, एमबिबिएस भर्ना रद्द गरी ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न माग
२०७६ साउन २८ गते १८:२२
चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्था लागू नगरी केही मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गरेको बहाना देखाउँदै ऐन लागू रहेको अवस्थामा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएपछि डा. केसीले त्यसलाई रद्द गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्साशिक्षा ऐनले सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऐनमा साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन हुन नसकेको तर भर्नाको समय आइसकेको बताउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सहित केही प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना खोलेका थिए । आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले भर्ना खोल्नुपर्नाको कारण आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको बताइसकेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले कुनै पनि बहानामा लामो संघर्षबाट ल्याइएको ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी भर्ना खोल्न नमिल्ने जनाएका छन् । ऐनविपरीत खोलिएको भर्ना तत्काल रद्द गरी छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू गर्न डा. केसीले माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले सत्याग्रहका क्रममा विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
डा. केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको म्याद सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तो दलीय भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्न फेरि एकपटक सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । साथै, डा. केसीले सरकारद्वारा गठिन न्यायिक जाँचबुझ आयोग तथा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यलयहरूमा नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न वहाना देखाई केहि मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानले MBBS को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रावृत्ति, साझा प्रबेश परीक्षा लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।
अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ ।